Maalinta: Oktoobar 29, 2019
96 ee jamhuuriyadeena. Sannadka Cusub Farxad
96 ee jamhuuriyadeena. Waxaan dhammaanteen geesiyaasheena u xushmeyneynaa naxariis iyo mahadnaq, gaar ahaan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, oo noo kaxeeyay saldhiggii ugu dambeeyay jidka xorriyadda.
Terminal-ka Altınordu Intercity Bus Terminal, oo ay dhiseyso Dowlada Hoose ee Magaalada Ordu ee ku taal geeska wadada giraanta ee degmada Altınordu, ayaa si isdaba joog ah u socda. FAHAMKA MACLUUMAADKA AYAA U BILAASHI NOLOSHA Wadarta 3 kun 177 [More ...]
Dawlada Hoose ee Magaalada Kocaeli waxay siisay tababar badbaado shaqaalaheeda ka hor tagida dhicitaanada wiishka ee xarumaha iyo ururada. Muwaadiniinta joogitaanka guryaha wiishashku u dhacayaan sababo kala duwan awgood, gaar ahaan koronto goynta [More ...]
Guddoomiyaha Fuat Gurel, Xildhibaan Karabuk Cumhur Unal iyo Niyazi Gunes, Adeegga Gaarka ah ee Maamulka Wadooyinka iyo Gaadiidka ee kooxaha ku xiran Keltepe Ski Center ballaarinta iyo howlaha muuqaalka dhirta. [More ...]
Platform Ururada Crimean Tatar, kulan wadatashi ayaa lagu qabtay Ankara. Isagoo ka hadlayey kulanka oo ay ka soo qeyb galeen maamulka Ururka Turks Turks of Düzce, Cusmaan Kesen, Gudoomiyaha Ururka Crimean Turks ee [More ...]
20 sano ayaa ka soo wareegtay markii Kacaanku, oo martigeliyay ku dhawaad ​​1,000 booqdeyaal ah 250 madxafkeeda gaarka loo leeyahay halkaas oo 58 lagu soo bandhigay bilooyin xarumaha TÜLOMSAŞ ee Eskişehir, waxaana soo saaray injineerada iyo shaqaalaha Turkiga. Visitors at museum ee s "baabuurka ugu horeysay Turkey ee gudaha" [More ...]
Guddoomiyaha Gobolka Bayburt Cüneyt Epcim Tareenka Tareenka
Guddoomiyaha gobolka Cuneyt Epcim, ayaa ajandaha wadahadalada tareenka ee la xiriira dariiqa laga wareejiyay Bayburt ilaa Gumushane uu sheegay in runta aysan ka turjumaynin. Badhasaabka Epcim wuxuu yidhi, “Kama soo daahno tareenka xawaaraha dheer. Hadalka hindisada [More ...]
Duullimaadyada Metro ayaa lagu Fidiyay Magaalada Istanbul Sababtoo ah Maalintii Jamhuuriyada
28-29 Bishii Oktoobar, qaar ka mid ah nidaamyada tareenka ayaa loo kordhiyay si loogu oggolaado muwaadiniinta inay ka qeybgalaan nashaadaadka Maalinta Jamhuuriyadda oo ay abaabusho Dowladda Hoose ee Magaalada Istanbul. Waxaa maamusha Metro İstanbul AŞ, oo ah shirkad hoos timaada Dowlada Hoose ee Magaalada Istanbul [More ...]
Xiriirka caalamiga ah ee injineeriyada latalinta (FIDIC) ayaa ku casuumay Refik Melikoğlu inuu ka hadlo shir caalami ah oo ka dhacay London. 3 iyo 4 ayaa la qaban doonaa Diseembar 2019. [More ...]